$ 15.39 miliara: miroborobo ny tsenan'ny fanofana fiara ao Shina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » $ 15.39 miliara: miroborobo ny tsenan'ny fanofana fiara ao Shina
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao Mafana China • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny tsena dia handray ny fivelarana haingam-pandeha aorian'ny fanamboarana ny indostrian'ny fanofana fiara tao anatin'ny dimy na enin-taona lasa.
Fitomboana haingam-pandeha voalaza mialoha ho an'ny tsenan'ny fanofana fiara ao Shina.
Ny tsenan'ny fanofana fiara ao Shina dia mahatratra 15.39 miliara dolara amin'ny taona 2020.
Tsy mitsaha-mitombo ny tsenan'ny fanofana fiara ao Shina.
Araka ny tatitry ny indostria farany, ny tsenan'ny fanofana fiara ao Shina dia efa hiditra amin'ny fe-potoana fitomboana haingam-pandeha ary 100 miliara yuan (15.39 miliara dolara amerikana) amin'ny 2022.
Tamin'ny 2021, nahita ny orinasa mpanofana fiara misy fifaninanana avo lenta ny indostria Rental Auto China ary eHi mandray ny ampahany lehibe amin'ny tsena.
Misy sinoa 418 tapitrisa manana fahazoan-dàlana mitondra fiara amin'ny taona 2020, fa ny tompona fiara tsy miankina dia 244 tapitrisa fotsiny amin'io taona io. Rehefa nitombo ny isan'ny mpamily ara-dalàna tsy nisy fiara tsy miankina dia nipoitra ny tobin'ny mpanjifa lehibe ho an'ny tsenan'ny fanofana fiara, hoy ny tatitra.
Noho ny politika tsara sy ny fitomboan'ny fanjifana, ny fangatahana fanofana fiara eto amin'ny firenena dia tsy mitsaha-mitombo, hoy ny tatitra.
Mpitsidika amerikana: Tsara i Hawaii, COVID na tsy misy COVID!
Ny hevitrao momba ny Fifidianana UNWTO ho avy
Fikarohana momba ny homamiadana sy COVID: Ny anjara asan'ny cytokines